"Nabad ku joog Dhulkaaga ama malaka-moowd doono oo xil ka qabo DFKMG"
Amaanka Caasimada Muqdisho Oo Faraha Kasii baxaya
Dilal Kala Duwan Oo Ka Kala Dhacay Gudaha Caasimada Muqdisho
Amaanka Magaalada Kismaanyo Oo Noqday Mid aan Laysku Halayn Karin Oo Kasii Daraya.
Baaq Xabad Joojin Ah Oo Ay Soo Saareen Isimada Iyo Waxgaradka Harti-waamo.
OTTAWA: BANAANBAX: FREE MAKHTAL CAMPAIGN
Gudoomiyahii degmada Ceel buur ee Gobolka Galguduud Cali Max'uud Siicow (Cali Waraabe) ayaa xaley [Isniintii Jun 4, 2007] lagu khaarajiyey magaalada Muqdisho oo ugu dameeyey masuuli la dil inkastoo Cali Maxamed Geeddi uu faro cidiyo leh ku fikaday.
Sida ay wakaaladaha waraarku waxay sheegayaan Marxuumka ayaa waxaa la diley xaley abaara 7:30 kii fiidnimo isagoo ka soo baxay masjid uu salaadii cishaha ku tukadey wakhtigaas oo uu ku sii jeeday guriga uu ka degan degmada Wardhiigley ee magaalada Muqdisho.
Koox dabley ah oo aan haybootada la garaneyn ayaa dishay dilka Gudoomiyaha, isla amrkaasna way baxsadeen.
Gudoomiyaha la diley ayaa ka mid ahaa gudoomiyeyaashii degmooyinka Gobolka Galguduud oo dhawaan ay magacaabeen masuuliyiinta Dawlada Federaalka KMG, gaar ahaan madaxweyne C/laahi Yuusuf oo dhawaan dhisey maamulka Galguduud.
Masuuliyiinta xilalka ka haya DFKMS ayaa indhowaalaba la beegsanayey, iminkana waxaa faraha ka baxay tirada masuuliyiinta la khaarajiyey.
Arintaan, ayaa dadka ku dhaqan caasiimada Soomaaliya ee Muqdisho waxay ugu magac dareen ama nabad ku joog dhulkaaga ama malaka-moowd doono oo xil ka qabo DFKMS, runtiina waa arin jirta oo aan la beenaysan karin.
Sidoo kale afar goor ayaa waxaa ka badbaaday shir-qool lagu doonayey in lagu khaarajiyo Ray-sul wasaare Cali Maxamed Geeddi, iyadoo uu hadda ka hor ka badbaaday qarax lala beegsaday C/laahi Yuusuf Axmed M.weynaha DFKMS oo ka dhacay Baydhabo iyo waliba hoobiye lagu weeraray Villa-Somalia oo la rabay in lagu dilo C/laahi Yuusuf.
Waxaa iyana sidoo kale ka soo bixi la Villa-Soomaaliya masuuliyiin badan oo xataa aan haysan meel ay ku aaryo qaataan ama aan biibito kafee ka cabi karin. Sidaas oo ay, tahay ay masuuliyiinta DFKM oo isku halaynaya ciidamada Itoobiya ayaa wali ku sii adkeysanayaan kalitalisnimada dadkii iyo dalkiiba galaafatay.
Haddaba, Su'aashu waxay tahay maxaa Soomaaliya u dan ah???
Isha: Wakaaladaha Wararka
Amaanka Caasimada Muqdisho Oo Faraha Kasii baxaya ,Xilli Ay Ku Sugan Yihiin Cutubyo Ciidamo Shisheeye Oo Ay Horboodayaan Dowlada KMG
Xaalada amaan ee magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa faraha kasii baxaysa tan iyo xiligii ay istaageen dagaaladii u dhexeeyey xoogaga diidan joogitaanka ciidamada shisheeye iyo weliba ciidamada huwanta ah ee Ethiopianka iyo kuwa dowlada KMG ah.
Cabsida iyo wel-welka haysta dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa noqday mid si weyn u hareeyey suuqyada iyo weliba goobaha lagu qaxweeyo taasoo muujinaysa dilalka isdaba jooga ah ee maalin iyo habeen kasta ka dhacaya caasimada qaraxyada lala beegsanayo goobaha ay joogaan masuuliyiinta dowlada KMG ah iyo weliba ciidamada Ethiopianka .
Axmed raage oo kamid ah maclimiinta wax ka dhiga jaamacadaha Gobolka banaadir ayaa sheegay inay magaalada muqdisho noqotay hoyga geerida islamrkaana uu amaankeedu kasii darayo taasoo uu xusay inay tahay wax lala yaabo iyadoo ay joogaan dowlad KMG ah oo weliba kaashaynaysa ciidamo isugu jira Ethiopian iyo Ugaandhiis inay caasimadii noqoto mid amaankeedii khal khal ku jiro .
''waxaa wax lala yaabo ah iyadoo ay magaalada muqdisho ay sheeganayso inay dowladu KMG ahi haysato in amaankeedu isu bedelo goob amaan darro ,taasina waxay kuu cadaynaysaa inaysan masuuliyadii ay sheeganayeen kuwa ugu sarsareeya dowlada KMG ahi aysan qaadi kari waayeen ,islamrkaana ay weliba siyaasad xumo ku darsadeen ,taasoo ku tusaysa inaysan ogolayn xoogaga siyasadeed ee kasoo horjeeda inay la gorfeeyaan waxii dalka iyo dadka dan u ah waxayna taasi ragaadinaysaa nabad ka dhalata dalka soomaaliya " ayuu yiri axmed raage
macalin axmed raage oo hadalkiisa sii wata ayaa ka codsaday dowlada KMG ah sadex arimood ay ku dhaqaaqaan taasoo uu sheegay in qodobka koowaad uu kula talinayo dowlada KMG ah inay shirka dib u heshiisiinta nagu soo fool leh ugu baaqdo qaybaha siyaasada kaga soo horjeeda inay kasoo qayb galaan ,qodobka labaad inay tixgelin weyn siiso golihii maxaakiimta islaamka soomaaliyeed oo iyagu wax ka yar 6-bilood ku hantay nabad kusoo dabaalida koonfurta iyo bartmaha soomaaliya oo weliba dib u abaabusho sidii ay ula heshiin lahayd ,iyo qodobka sadexaad oo uu sheegay hadii ay ku guulaysan wayday masiirkii danaha umada soomaaliyeed islamrkaana ay dalka kasoo cusboonaadeen dhibaatooyin amaan xumo inay iyo cabsi daran inay xilka iska casisho.
Hadalkan raage ayaa kusoo beegmaya xili ay magaalada muqdisho xalay ilaa saaka ka dhaceen qaraxyo isdaba jooga oo mid kamida lala beegsaday hoyga raysal-wasaaraha dowlada KMG ah islamrkaana ay ku nafwaayeen in ka badan 7-qofood halka tiro aan la xaqiijina ay ku dhaawacmeen .
Si kastaba ha ahaatee magaalada muqdisho ayaa amaankeedu faraha kasii baxayaa tan xiligii ay istaageen dagaaladii qaraaraa ee dhex maray xoogaga wax iska caabinta iyo weliba ciidamada xukuumada Ethiopia.
Waxaa sii kordhaya tirada dadka lagu dilayo magaalada muqdisho islamarkaana aan la ogayn dadka gaysanaya dilkaasi iyadoo habeenkii xalay ahaa dilal kala duwan loo gaystay 4-qofood oo ku jiray gudoomiyaha dhowaan loo magacaabay degmada ceelbuur ee gobolka gal-guduud.
Xuseen cumar siicow oo dhowaan loo magacaabay xilka gudoomiyenimo ee degmada ceel-buur ee gobolka gal-guduud ayaa dil xalay loogu gaystay isagoo kasoo baxaya salaadii cishaha sida uu saxaafada u xaqiijiyey qof goobjooge ah oo diiday in magaciisa la shaaciyo
Goob joogahaasi ayaa waxa uu sheegay in marxuumka marka la dilayey uu masaajidka kasoo raacay nin dhalin yaro ah oo madaxa soo duubtay islamrkaana uu madaxa kala beegsaday raasaas kqa dhacaysay baastooad.
Dhinaca kale Labo nin oo meyd ah ayaa saaka lagu arkay iyaga oo yaala agagaarka saldhigga booliska degmada War-dhiigleey.
Meydakan labada nin ayaa u muuqday kuwo lagu diley jir-dil iyo ceejin islamrkaana ay qoorta iyo feerahooda ka muuqdeen dhaawacyo jir-dileed ,ma cada cidda ka dambaysa dilka labadan nin iyadoo ay meeshaasi ka qaadeen marxuumyadan ciidmada booliska saldhiga wartdhiigley oo aan sidaasi uga dheerayn halka ay yaaleen maydka labadan nin.
Xuseen Cabdulle Xasan oo ka mid ah dadka deegaanka oo saxaafadu ay kula kulantay saldhigga degmada War-dhiigley ayaa waxa uu uga digay dadka in aysan isku marin dhanka dambe ee saldhigga oo ay fariisin u tahay ciidamada Ethiopia.
Sidoo kale labadan nin ayaa dadka deegaankaasi qaarkood tibaaxayaan inay dilkan ka dambeeyeen ciidamada Ethiopia ee ku sugan saldhiga wardhiigley dhabarkiisa dambne iyo xaafada xamar billa islamrkaana la sheegay inay ciidamada ethiopia waqtiga habeenkii ah ay cabsi xoogan qabaan oo ay keeb la yuurur yihiin isdlamrkaana iska dilaan wax alle waxii kusoo aada halka ay degan yihiin ,taasoo tiro ka dhowr jeer ah ay ku toogteen dhowr qof oo qaarkood madaxa looga jirey.
Wararka naga soo gaaraya magaalada kismaanyo ayaa sheegaya inay ka taagan yihiin xiisad colaadeed oo mudo soo jiitamaysay islamrkaana ay sii hurisay dilkii dhowaan loo gaystay taliyihii ciidanka nabad-sugida gaashaanle makhtal oo loo yaqaanay Gaa-gaab
Sida aanu ka helay masuuliyiinta maamul beeleedka gacanta ku haya magaalada kismaayo ayaa ku eedeeyey falalka dilalka iyo isku dayada beryahanba ku soo cusboonaaday Kismaayo inay ka dambeeyeen maleeshiyo beeleedka ku sugan Buulo-guduud. Mas'uul diiday inaanu magaciisa shaacino ayaa sheegay inuu eedda dusha uga tuurayo ciidamada dhawaan laga saaray Kismaayo.
Masuulka ayaa intaasi ku daray in Dilkii loo gaystay taliyihii nabadsuggidda Kismaayo Maqtal Gaa-gaab iyo isku daygii dilka ahaa ee lala beegsaday taliyaha booliiska Shanfool ayaa ahaa mid qorshaysan oo looga dan leeyahay in la khal-khal galiyo amaanka Kismaayo, lana rabo in mar-marsiiyo loogu helo si weerar ciidamada itoobiyaanku ugu soo qaadaan kismaayo ayuu raaciyey mas'uulkaas eedayntiisa.
Sidoo kale masuulka oo hadalkiisa sii raaciyey in Shirqoolada noocaan oo kale ah ayaa loo malaynayaa inay yihiin kuwo qorshaysan oo ujeedo laga leeyahay.
Mas'uulkaas waxaa uu ku hanjabay inaysan u dulqaadan doonin ficilada noocan oo kale ah, isla markaasna ay weerari doonaan ciidamada ku sugan Buulo-guduud waa siduu hadalka u dhigaye.
Magaalada Kismaayo ayaa ah mid aanan amaankeeda iminka la isku halayn karin, kana sii daraysa maalinba maalinka ka dambeeya.
Baaq nabadeed oo ku aadan dadka walaal ah ee isku dilay Degmada Buuhoodle ee Gobolka Cayn anagoo ah Waxgaradka , Aqoonyahanada , iyo dhamaan dadka ka soo jeeda Gobolada Sool, Sanaag, Cayn iyo Nugaal waxaanu baaq xabad joojin ah u diraynaa Dadka walaalaha ee dirirtu ku dhex martay Degmada Buuhoodle waxaanu leenahay Caqligu ha shaqeeyo oo yaanu qorigu shaqayn wixii walaaltinimo lagu waayo qori lagu heli maayo ,, hana la xusuusto wada dhalashada , Islaamtinimada iyo wadaniyada intaba.waxaan sidoo kale baaq nabadeed u diraynaa dhamaan dadka soomaaliyeed meelkasta oo colaadi ka jirto Allahna waxaan ugu rajaynaynaa in uu nabad ku soo celiyo.
waxaanu si gaar ah ugu tacsiyeynaynaa dadkii dagaaladaas ku dhintay waxaanu leenahay dadkii qosaskii ay ka dhasheen Allah samir iyo Iimaan ha ka siiyo bedel khayr qabana ha ugu badelo aakhiro iyo aduunba iyana ha ka dhigo kuwii ku samra.
Ugaas Maxamuud Ugaas Xuseen (Baqow)
Caaqil Yuusuf Haybe Abokor
Caaqil Jaamac Nuur Cadde
Dr C/risaaq Maxamuud Raamaale
Nabadoon Aadan Barre Guure
Nabadoon Jaamc Ducaale Abokor
DR Daahir Cabdulaahi Muuse
Nabadoon Ismaaciil Finiin
Aadan Axmed Yuusuf
Cabdulaahi Faarax Soodaad
Axmed Maxamuud aadan Guul
Ismaaciil Blle Guure
Nabadoon Warsame Cumar
Wararkaasi waxay sheegeen, waa sida ay warbaahinta maxalliga hadalka u dhigta'e: "in Madaxweyne Riyaale aanu qaadan wax tallaabo iyo go'aan ah oo uu si adag ugu muujinayo diidmadiisa – qawl iyo ficil midna, isla markaana uu si niyadjab leh uga warsugayey waanwaan, dood iyo maslaxaad ay wadeen Wasiirka Arrimaha Dibadda, mudane Cabdillaahi Maxamed Ducaale iyo wasiirka Duulista Hawada, mudane Cali Maxamed Warancadde, iyada oo sida la sheegay saraakiisha Nabadsugidda Diyaaraddu ay ku adkaysteen inay amar ku haystaan baadhistaas."